Tag: indianapolis | Martech Zone
Kuzadziswa kweIDS: Inochinjika Warehouse uye Kuzadzikiswa Services
Muvhuro, June 8, 2015 Svondo, Zvita 24, 2017 Douglas Karr
Makore mashoma apfuura, ini ndaifanira kutora nzvimbo yeIDS kuno kuMidwest. Chaive chakandivhurira ziso nekuti ini ndaive ndisati ndamboona kufambira mberi kwakaitika mune zvekushandisa, imba yekuchengetera uye maindasitiri ekuzadzikisa. Nekukurumidza kumberi kune rino gore uye ini ndakave nekukurukurirana kunoshamisa nevepamusoro chikoro bhizimusi kwandaive ndichigovana navo nezve ecommerce indasitiri. Vanhu havazive kuti varipo
Indy ndeye StartUp Shamwari
Muvhuro, Mbudzi 15, 2010 Chipiri, Mbudzi 29, 2016 Lorraine Bhora
Douglas Karr, aive mumwe wevatongi vana vakatibatsira kusarudza timu inokunda kubva kuKutanga Indy. Mune ino bvunzurudzo anotaura nezvekuti nei aibatanidzwa, uye nei zvine musoro kuti mafekitori emagetsi atange kutanga kuno muIndipolis. Douglas Karr paKutonga paKutangaUp Svondo
Paunenge Uri Kudya Kudya kwemanheru uye Kuona TV, Isu Tanga tichivaka Mabhizinesi
Mugovera, Mbudzi 13, 2010 Mugovera, October 18, 2014 Lorraine Bhora
Vhiki rino, 57 muzvinabhizimusi anga achishanda kutanga mabhizinesi matsva manomwe. Kubva pane zvishandiso zve software nesocial media kune inotakurika laptop tafura, iwo mazano ari kutanga kuuya pamwechete. Uye kana iwe uchida kuziva zvakakwana kuti zvese izvi zvichaitika sei, uye chii icho vatongi (kusanganisira Douglas Karr) funga nezvemazano ebhizinesi, tibatane nesu kunetiweki uye mharidzo dzekupedzisira neSvondo manheru: http://www.eventbrite.com/event/851407583
Kutanga Kumusoro Kwevhiki - Kuchinja Nyika Guta Rimwe Panguva
Muvhuro, October 4, 2010 Mugovera, October 18, 2014 Lorraine Bhora
Vhiki rino 125 vanhu vanobva kudzinopfuura nyika makumi matatu vakapedza mazuva mashoma vachikurukura maratidziro ekuti Kutanga Kwevhiki kunogona sei kukanganisa hupfumi hwedu. Inonzwika kupenga? Iyo Kauffman Foundation inoda kubheja $ 30 isu hatisi. Vakapa mari yemakore matatu iyo yakabvumidza timu ye StartUp Yevhiki kuti ikure kune vasere vashandi venguva yakazara. Iri timu diki, richazopa rutsigiro kumazana ezviitiko zveKutanga kweKupera kwevhiki kutenderera pasirese.
Kune Innovation Pano paSilicon Prairie
China, May 6, 2010 Mugovera, Gunyana 19, 2015 Lorraine Bhora
Ini ndakapedza zuva rinoshamisa semumwe wevatongi veMira Awards yegore negore. Kunyangwe ini ndisingakwanise kukuudza kuti ndiani akahwina (uchafanirwa kuenda kunopinda Mira Awards muna Chivabvu 15). Ini ndinogona kukuudza kuti kune humwe hunoshamisa hunyanzvi huri kuitika muno muIndiana. Ini ndaive mutongi muzvikamu zviviri zveSocial Media neCorporate IT. Iko kusiyanisa kusinganzwisisike kunofamba kubva kune nimble vanamuzvinabhizimusi kuenda kune zvitsva manger mukati mezvinyakare masangano. Zvangu